किवी र ड्रागनफ्रुटको परिचय, यसको अवस्था र अवसर – Upahar Khabar
किवी र ड्रागनफ्रुटको परिचय, यसको अवस्था र अवसर
प्रकाशित मिति : १० भाद्र २०७७, बुधबार २०:०० August 26, 2020
संगम बस्नेत, पोखरा
किवी [ Actinidia chinenis ] एक मध्य पहाडमा (१०००-२५०० मि.) फल्ने औसत आकारको लहरे फल हो । बाहिर खैरो रङ र भित्री रातो-हरियो हुने यो फल अण्डाकार भन्दा अलि लामो आकारको ४० देखि ९० ग्रामसम्म हुन्छ । ३० ओटा जिल्लामा फौलिएको यो फल चिनको रैथाने फल हो । चिनिया गुजवेरी [Chinese gooseberry] को नामले पनि त्यसैले चिनिन्छ । सन् १९५९मा न्युजिल्यान्डमा पुगिसकेपछि राष्ट्रिय चराको नाममा किवी रहन पुग्यो । ५ वर्षमा लहरामा पाक्ने यो फल एक पल्टमा ५०-८० के.जी सम्म हुन्छ । यसको मूल्य औसतमा रु. ३०० पर्छ भनेर इलाममा लामो समय खेति गरेका कृषक तारामणि खतिवडा बताउँछन् । अरु फलको तुलनामा यो नेपालको लागि बाह्य फल भएर पनि, यो एकदमै नयाँ हो । अत्याधिक पौष्टिक तत्व हुने यो फलमा पोटासियम तथा भिटामिन सि को मात्र अधिक हुन्छ । लहरे प्रजातिको यो फललाई खेति गर्नलाई ठाउँ ठुलै चाहिन्छ ।
ड्रागनफल (Hylocerus undatus) : यो फल भेटनरी डा.जगन्नाथ राईले पहिलो चोटि २०५७ सालमा अमेरिकाबाट भित्राएका हुन् ।यो फल भियतनाम र श्रीलंकामा अति प्रसिद्ध छ । ( रिजाल,२०१९) ।
अमेरिकाको रैथाने रहेको यो फल (cactus) सिउँडी प्रजातिमा पर्छ । यसको मूल्य यो फल्ने उमेरका आधारमा गरिन्छ । १ वर्षमा फल्ने रु. २०००,२ वर्षमा फल्ने रु. १००० र ४-५ वर्षमा फल्ने रु. ५०० रहेको छ । फलको आकार बाटुलो, प्रजाति अनुसार रङ फरक हुन्छ । हाल नेपालमा बोक्राको आधारमा ( बाहिरी भाग ) रातो, गुलाभी र पहेँलो गरेर तिन प्रकार पाइएको छ । ५००-८०० ग्राम यसको औसत तौल हो । ६-१२ महिना यसले फल दिन सुरु गरे पनि १ महिनाबाट नै यसलाई काटँछाट गर्नुपर्छ । यसको हाँगा केही समय पछि लम्बिन थाल्छ ,त्यसैले यसलाई सहारा दिनुपर्छ । सहारा दिनलाई प्रायजसो कुनै काठको खम्बा गाडिन्छ ।
अब यसको अवस्थाको बारेमा चर्चा गरौँ –
नेपालमा अझै पनि पुरै रुपमा फल किनेर खाने परम्परा बसेकै छैन ,घरमा भएको फल टिपेर खाने तर बाहिरबाट किनेर नल्याउने धेरैको घर देख्न पाइन्छ । यसको प्रमुख कारण नेपालीको आर्थिक स्थिति पनि हो । तर अत्याधिक फल फलेको स्थितिमा बेच्नुपर्छ भन्नि धारणा छैन हामीमा । नेपाल अझै २५% जनसङख्या गरिबीको रेखा मुनि छ । (२०१०,एसिएन विकास बैेङ्क)
३ करोड जनसङख्यामा ५० लाख पनि छैनन् दैनिक रुपमा फलफुल किनेर खाने । ग्रामीण क्षेत्रमा अझ कम छ ।
नेपालहरु स्वादका बढी नै पारखी छौ,त्यसैले पनि खुरर्पानी, हलुवावेद जस्ता धेरै फलफुल मान्छेले चाखेका छैनन् ,कति त यस्ता छन् जसले सुनेका पनि छैनन् । हाम्रो जिब्रो केवल आँप र अङगुर मात्र छ ।
केहि फलफुलका बोटहरु घरमा नरोपिएका होइनन् तर फलफुलको महत्व भन्दा पनि साँस्कृतिक पहिचानका लागि बोटहरु रोपिन्छ ।उदाहरणार्थ,केराको बोटको हिन्दू परम्परामा धेरै महत्व छ । तिहारमा भाइटिकादेखि विवाहको मण्डप बनाउनसम्म यसको प्रयोग हुन्छ । त्यस्तै नेवार जातिमा वेलसित विवाह गर्दिने पनि परम्परा छ ।
भौगोलिक स्थितिको विवधताले यातायातको व्यवस्था एउटा जटिल समस्या हो । फलफुलको ओसारप्रसार गर्दा दुरी र फलफुल बिच बाटोमा नै कुहिने डरले पनि फलफुललाई व्यवसायिक गर्न सम्भव हुँदैन। अत्याधिक पानी हुने फलफुल अझ चाडो कुहिन्छन् ।
यतिका फलफुल सम्बन्धि समस्याहरु पहिल्यै हुँदै गर्दा पनि किवी र ड्रागनफल कसरी बेच्नी ? हुन त, आफैँ लगानी गरेर नाफा कमाउनी किसान नभएका पनि होइनन् तर ती प्राय विदेशबाट फर्किएका कामदारहरु बढि छन् । नेपालमै बस्दै आएका मध्यम तथा निम्नवर्गहरु लाई अझै गाह्रो छ ।
तर पनि किवी र ड्रागनफल खेतीलाई समृद्ध गर्न के के गर्न सकिन्छ ?
विचौलिया समस्या अत्याधिक मात्रमा नेपालमा छ,त्यसैले सरकारी निकायबाट फलफुल बेच्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ जसले गर्दा किसान उचित मूल्य पाउन सकुन् । चितवनको रु ४० को गोलभेँडा डुम्रे पुग्दा १२० हुने विचौलियाकै प्रभावले हो ।
यातायातको व्यवस्थापन अर्को समस्या हो । किसानले आफैँ बोकेर फलफुल बेच्न भन्दा पनि ,सदरमुकाम सम्म फलफुल ओसार गर्ने र त्यहाँबाट फलफुल प्रसार गर्ने थालनी गर्नुपर्छ । फलफुल कुहिने डर भएको स्थितिमा किसानलाई रसायनको मिश्रण गरेर जोगाउने तरिका सिकाउनुपर्छ । किसानको सहायताको लागि उर्ताद्धतिर नमूनाको रुपमा जानकारी दिएको छ ।
सानो लगानी गर्ने किसानले सामूहिकरुपमा खेती गर्नुपर्छ जसले गर्दा लगानीेबाट नोक्सान हुने सम्भावना कम होस् । एसोसियनसित आबद्ध रहेर पनि यसबाट नाफा लिन सकिन्छ ।
पर्यटकहरु नँया – नँया स्वादका सौखिन हुन्छन् ,त्यसैले सामूहिक किसान मिलेर पर्यटक व्यवसायीसित सम्पर्क गर्नुपर्छ । पोखरा, काठमाडौँ, जिरी, नगरकोट, इलाम जस्ता ठाउँ क्षेत्रहरु किवी र ड्रागनफलका उचित बजार हुन सक्छन् । गर्मीको समयमा फिरन्ते पर्यटकका लागि सलाद र जुसको रुपमा यो अति प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सस्तो दरमा किसानलाई लगानी मिलेन भने ब्याजले कृषकलाई मार पर्छ । त्यसैले किसानलाई तालिमको साथसाथै सस्तो दरमा कर्जा दिने व्यवस्था गरोस् ।
कहिलेसम्म हामी अर्काको देशलाई सम्पन्न बनाउदै,हामी कङगाल हुने ? नाङ्गा डाँडा र पाखामा यस्ता प्रोटिनयुक्त फलफुल नरोपे के रोप्ने ? नेपालको खेतिगर्ने मिल्ने जमिन ७ % त अझै बाँझो छ । क्षेत्रफल बढे पनि उत्पादकत्व ८.८९ बाट झरेर ८.११ मा पुगेको छ ।
सरकारले कार्यकारी निकायबाट,फलफुलको बीउ ( विरुवा ) को व्यवस्थापन ,निरन्तर रेखदेख गरेर कृषकलाई हौसाउने प्रशिक्षकको उपलब्धताको जिम्मा मात्र नलिई सिँचाइको पनि उचित बन्दोबस्त गरोस् । विश्व बैङ्कको सर्वेक्षण अनुसार जम्मा २९.७४% को कृषि जमिनले सिँचाइको व्यवस्था पाएको छ ।
(थोपा सिँचाइ सबैभन्दा बढि उपयोगी सिँचाइ मानिन्छ । पाइपमा प्वाल पारेर सिधै बोटको जरामा नै पानी पु¥याइन्छ यो पद्धतिमा जसले गर्दा पानीको खपत मात्र नभइ पोषणतत्व पनि बिरुवाले सजिलै पाउँछ ।)
Posted in आर्थिक, मुख्य समाचार, राष्ट्रिय, विचार, स्थानीय तह
पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरसबाट दुई महिलासहित ११ जनाको मृत्यु
भान्छामै पाइने सामग्री कोरोनाको औषधि